DISTRIKAN’AMBANJA : Tovolahy iray maty nofirafiraina tamin’ny antsy, nitolo-batana ny nahavanon-doza
Mirarakompana ny vono olona amin’ny fomba feno habibiana mitranga amin’ny faritra maro eto amintsika. 7 août 2019
Sahy mifamono, mifandatsa-drà ary tsy misy tahotra intsony ny ankabeazan’ny zava-miseho matetitetika nahazoana loharanom-baovao . Araka ny tatitra voaray avy any amin’ny Distrikan’Ambanja izao dia tovolahy vao erotrerony 25 taona monja no maty, izay nisy namono tamin’ny fomba mahatsiravina ny alahady faha 04 aogositra lasa teo iny. Raha ny fanazavana voaray bebe kokoa dia mpandraharaha misehatra amin’ny lavanila sy kakao irony no antom-piveloman’io tovolahy io. Ny nahagaga ireo mpiray vodirindrina taminy anefa dia nindaosin’ ny fahafatesana tampoka tsy nampoizina ity farany tao Ambalafary Kaominina Maevatanàna Distrikan’Ambanja. Rehefa natao ny fizahana ny razana dia voaporofo fa nofiraina tamin’ny antsy teo amin’ny tendany izy io ary dia tapaka nizara roa mihitsy izany.
Nitolo-batana tany amin’ny Polisy ny nahavanon-doza :
Voalaza fa nitolo-batana tany amin’ny zandary tao Bemanevika ny Alatsinainy teo ny nahavanon-doza namono nahafaty io lehilahy io taorian’ny vono mahatsiravina vitany. Tsy mbola misy mahafantatra mazava ny tena antony nifandiran’ny roa tonta kosa anefa ny rehetra hatramin’izao. Mbola eo am-panohizana ny famotorana lalina ny eo anivon’ny tompon’andraikitra misahana izany ankehitriny. Arahina akaiky ny tohin’ny raharaha.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (128) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (91) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (84) 22 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (74) 26 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (72) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (66) 22 mai 2020